शेयर बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह कायमै, ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढीको कारोबार *
नेप्से परिसूचक १५४०.५१ विन्दुमा
भदौ २९, काठमाडौं । शेयर कारोबारमा पछिल्लो समय लगानीकर्ताको उत्साह बढ्दै गएको छ ।
कारोबारमा प्राविधिक समस्या आउँदा पनि लगानीकर्ताहरु सक्रिय र संयम भएर लगानी गरेको देखिएको छ । अनलाईन मार्फत ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार हुँदै आएको बजारमा सोमवार रू. ३ अर्ब २१ करोड ४ लाख ७९ हजार बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको छ ।
आइतवार टिएमएसको समस्याबाट प्रभावित बनेको बजारमा पनि रू. ३ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख बराबरको कारोबार भएको थियो । आइतवारको तुलनामा भने सोमवार कारोबार रकममा भने कमि आएको हो । सोमवार १९० कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ ।
ती कम्पनीहरुको ४५ हजार ४५३ पटकको व्यापारमा ८८ लाख ३४ हजार २१५ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यो दिन सर्वाधिक रकमको कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलेनै गरेको छ । लामो समयदेखि निरन्तर सर्वाधिक कारोबार गर्दै आएको उक्त कम्पनीको सोमवार रू. २० करोड ४३ लाख ८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
कारोबार रकमसँगै यस दिन नेप्से परिसूचक ३ दशमलव २६ अंक बढेर १ हजार ५४० दशमलव ५१ विन्दुमा पुगेको छ । सोमवार १ हजार ५४५ दशमलव ६९ विन्दुदेखि खुलेको बजार १ हजार ५५३ दशमलव ५७ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने १ हजार ५३८ दशमलव ४४ विन्दुसम्म झरेको थियो ।
सोमवारको कारोबारमा बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्यत र वित्त समूहको शेयरप्रति लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढी देखिएको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १२ समूहमध्य बैंकिङ समूहको १ दशमलव २१ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव १९ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, वित्त समूहको १ दशमलव शून्य २ र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
सोमवार व्यापारिक समूहको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत, होटल समूहको १ दशमलव १ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव २३ प्रतिशत, अन्य समूहको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत र जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ । सोमवार अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । यस दिन धेरै जसो जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ ।
सोमवार एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ दशमलव ९६ प्रतिशत, युनियन हाइड्रोको ९ दशमलव ८६ प्रतिशत, रिडी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ५२ प्रतिशत, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको ९ दशमलव ५२ प्रतिशत, छ्याङ्दी हाइड्रोको ९ दशमलव ५२ प्रतिशत, बरुण हाइड्रोको ९ दशमलव ३५ प्रतिशत, सिनर्जी पावरको ९ दशमलव २२ प्रतिशत र दिव्यश्वरी हाइड्रोको ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत शेयरमूल्य बढेको हो ।
बढेको बजारमा सोमवार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयरकोमूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव १७ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन उक्त कम्पनीको संस्थापक शेयरमूल्य ८ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ८९८ ले घटेको हो ।
सोमवार सर्वाधिक कारोबार गर्ने पाँच ओटा कम्पनी :
स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)
*नेप्सेको वेबसाइटमा सोमवारको कारोबार रकम सच्याएकोले सोही अनुसार यसअघिको समाचारमा उल्लेखित कारोबार रकम पनि सच्याइएको छ–सं
९.३७ अंक माथि उक्लियो शेयर बजार, जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाए [२०७७ असोज, ७]